UGeorge Jones, iminyaka engama-50 yokuPhupha: I-Soundstage Indawo ekhethekileyo
"I-GEORGE JONES, IMINYAKA E-50 YEMISEBENZI: UMSEBENZI OYEMPILO"
Umdlalo womculo wesizwe uGeorge Jones, ugubha iminyaka engama-50 njengomculi wokurekhoda uncedo oluncinci lwabahlobo bakhe ku-GEORGE JONES, IMINYAKA E-50 YEMISEBENZI: UMTHETHO OYIMPILO EYEMPILO. Iholide yehora enye yeenkwenkwezi zonke kwi-PBS Night Thanksgiving ebusuku, uLwesine, Novemba 25, 2004, ngo-10: 00 ntambama ET. Inkcazelo yeeyure ezimbini zeprogram iyafumaneka ngoDisemba 2004 noJanuwari 2005 (khangela iinkcukacha zendawo).
Uluhlu olupheleleyo lwabaculi abathatha inxaxheba, bonani ngezantsi.
Ingaba amaxesha awamkela iingoma ze-honky-tonk okanye i-pop "eyenziwe" ngokugqithiseleyo, uGeorge Jones uye waqhubeka enza uphawu lwakhe lomculo welizwe kwaye waveliswa yimizuzu yonke yesibini yesiqingatha se-20. Enyanisweni, uJones uye waba neengoma ezingaphezulu kunokuba ziphi na ezinye iicandelo kunoma yimuphi uhlobo lomculo othandwayo.
ISOUNDSTAGE isandula ukuhamba ukusuka kwii-studios zasekhaya eChicago ukuya kwi-BellSouth Acuff Theater yaseNashville ukuze ibambe i-khonti edibene neenkwenkwezi kwi-career ye-George Jones. Impembelelo yakhe kubaculi bazo zonke iintlobo kubonakaliswa kwimisebenzi eyenziwa ngumntu wonke ovela ku-Alan Jackson noKenny Chesney kuHarry Connick, uJr. no-Aaron Neville. I icon yelizwe ngokwakhe ujoyina kwinani lee-duet kunye neendwendwe eziliqela.
ISOUNDSTAGE premieres ekhethekileyo kwizithende zokukhululwa nguGeorge Jones - iminyaka engama-50 yeThupha, ukuhlanganiswa kwe-dis-three enomculo owodwa kunyaka ngamnye ka-Jones.
Ngama-73, uGeorge Jones uyaqhubeka ehamba phambili kumakhonsathi angaphezu kwe-100 ngonyaka kwaye sele esebenza kwi-albhamu yakhe ezayo, ethi uya kuba "iingoma endandinqwenela ukuba ndibe nazo."
I-GEORGE JONES, IMYAKA E-50 YEMISEBENZI (iiyure ezimbini zeeyure): Landela u-Adkins, uKenny Chesney, uHarry Connick, uJr., uJoe Diffie, uVince Gill, u-Amy Grant, u-Emmylou Harris, u-Alan Jackson, uSammy Kershaw, u-Uncle Kracker, uKris Kristofferson, UShelby Lynne, uMartina McBride, uLorrie Morgan, uAron Neville, uConnie Smith, uPony Pony, uRony Travis, uTanya Tucker kunye noWynonna.
I-GEORGE JONES, IMINYAKA E-50 YEMISEBENZI (ingcaciso yeeyure enye): uKenny Chesney, uHarry Connick, uJr., uVince Gill, u-Amy Grant, u-Alan Jackson, uMartina McBride, uLorrie Morgan, uAron Neville, uPony Pony, uRayy Travis noWynonna.
Abavelisi-ntsebenziswano: I-WTTW yeSizwe yokuvelisa kunye ne-HDReady. Umvelisi oyintloko: Randy King, WTTW. Umvelisi / umlawuli: Joe Thomas, HDReady. Umkhiqizi womgca: uNicolette Ferri, WTTW. Ifomathi: I-CC Iyonke i-Sound Sound HD apho ikhona
Ubomi Bomculo: I-Tom T. Hall "Yonyaka WeClayton Delaney"
Abalishumi Abadlali Abakhulu Abakhulu Ehlabathini
Indlela yokudibanisa "Umqambi" (ukudweba)
Kuthekani ukuba i-Roe v. Wade yaguqulwa?
Funda amaVebhu aseJamani 'Haben' (ukuba abe ne) kunye no-'Sein '(ukuba abe)